မိုက်မဲချစ် – Grab Love Story
ကိုစိုးထူး က မျက်လုံး ခပ်မှေးမှေး ပြုကာ မယားပါသမီး တင်မေခက်ကို ကြည့်သည် ။
ငါးသိန်းဆိုတာ အတော့်ကို များသည် ။
သိုသော် ကိုစိုးထူး ကြံဖန်မည် ဆိုလျှင်တော့ ရနိုင်သည် ။ မမိလိုချင်တာတွေ ရမည်ဆိုရင်တော့ ကိုစိုးထူးသည် ငွေငါးသိန်းကို ပေးဖို့ အသင့် ..။
“ ငါးသိန်း…မနည်းပါလား ..အေးလေ ..ငါလိုချင်တာတွေ ရမယ် ဆိုရင်တော့ ငါကြံဖန်ရှာပြီး
အခြေအနေကို ပုံဖေါ်စပြုလာသော ကိုစိုးထူးက စကားဖေါက်လိုက်သည် ။
“ ဦးလေး ဘာလိုချင်လဲ ပြောပါ ..ဦးလေး စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင်…ကျနော်…ဟို…ကျနော် …….”
တင်မေခက်မှာ စကား အဆုံးသတ်ဖို့ ခက်နေပြန်သည် ။ ပြောလို့ မထွက် ။
“ နင့်ကို ငါလိုးချင်တယ်..ဖြစ်မလား ….”
သဘောပေါက်စ ပြုလာသော ကိုစိုးထူးက ခပ်ရင့်ရင့် မေးသည် ။ တင်မေခက် မျက်နှာ ရဲကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ ခေါင်းကိုလည်း အတင်း ငုံ့ထားသည် ။
“ အပေးအယူ ဖြစ်မလား…ပြောလေ ….”
တင်မေခက်သည် အံတင်းတင်းကြိတ်ခါ ခေါင်းကို ဆတ်ကနဲ ညှိတ်ပြသည် ။ ပထွေး လိုးတာ ခံပါတော့မည် ဟု လက်ခံသဘောတူလိုက်ရသည့်သဘောမို့ တင်မေခက် မျက်ရည်လည်သည် ။
အရမ်းရှက်သလို အတော်လဲ စိတ်လှုပ်ရှားသည် ။ ခေါင်းကို ပို ငုံ့ထားသည် ။
ကိုစိုးထူးကတော့ မမိအပိုင်လိုးနိုင်တော့မည့် မယားပါသမီးကို အားရပါးရပင် တစိမ့်စိမ့် ကြည့်သည် ။
တင်မေခက်သည် ခေတ်ဆန်ဆန် ခပ်ကော့ကော့ ဝတ်စားတတ်သော နှစ်ထောင့်နှစ်ခုနှစ် သမီးပျိ
ု ဖြစ်သည် ။ ဒီနေ့ ဝတ်စားထားတာကလည်း အတော့်ကို ခေတ်ဆန်သည် ။ ဟော့(တ် ) သည် ။ ဖေါ်ထားတာ မဟုတ်သော်လည်း ပေါ်တော့နေသည် ။ ကော့နေသည် ။ ကြိုးတချောင်း ရင်ခံအင်္ကျီအဖြူရောင်ပေါ်မှာ အညိုရင့်ရောင် ခါးတိုအကျ င်္ီလေး ဝတ်ထားသည် ။
အပေါ်ဝတ် ခါးတို အကျ င်္ီလေးမှာ လည်ပင်း ကြယ်သီးတလုံးသာ ပါသည် ။ထိုကြယ်သီး
တပ်ထားရာ အကျ င်္ီရင်ဘတ်သည် သာမန်အားဖြင့် ခပ်စေ့စေ့ ဖြစ်နေသော်လည်း ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတို့ကြောင့်
တခါတခါ မဟတဟ ဖြစ်သည် ။ ခပ်ဟဟဖြစ်သွားသည့် အခါပင် ရှိသည် ။
ထိုအခါ အကျ င်္ီရင်ဘတ် အဟကြားမှနေပြီး ဖြူဖွေး အိစွာ ပေါ်နေသော ရင်ညွန့်ကို ပြင်ရသည်
။နို့အုံသား နစှ ခ် ရဲု့ အညှာနေရာလေးကလည်း မပေါ့်တပေါ် အကွရဲာလေး မြင်နိုင်သည်။
အောက်ဖက်တွင်တော့ ဘေးကွစဲ ကပ်ထမိန် ကြပ်ကြပ်ကို ဝတ်ထားသည် ။
ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်နေသော အခါ စကပ်ထမိန်ရဲ့ ဘေးကွကဲ အလိုလိုပင် ဟသွားသည် ။ ဘေးကွသဲည် ပေါင်အလည်နားလောက် အထိပင် ရှိလေရာ အိဖြိုးသော ပေါင်သားဖွေးဖွေး တဝက်သာသာလောက်
က ပေါ်တင်ကြီး ဖြစ်နေသည် ။
ကိုစိုးထူးသည် တင်မေခက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေရာ သာမန်အားဖြင့် ဆိုလျှင်တော့ စကပ်ထမိန် ဘေးကွအဲဟမှ ပေါ်နေသော ပေါင်သားဖွေးဖွေး များကို မြင်နိူင်စရာ အကြောင်း မရပှိါ။
သို့သော် အထက်တန်းစား ဆိုင်ရဲ့ သီးသန့်ခန်းထဲတွင် ဘေးပတ်လည် မှန်ချပ်ကြီးများ တပ်ဆင်ထားလေရာ ထိုမှန်ချပ်ကြီးပေါ်တွင် ဘေးတိုက် အနေအထားဖြင့် ပေါ်နေသော တင်မေခက်ရဲ့ ပရုံ ပိ်
ကို ပေါင်တန်တဝက်လောက် အထိ တွေ့မြင်နေရသည် ။
“ နင် လိုချင်တဲ့ ငွေငါးသိန်း ငါပေးမယ် …နငက် ငါစိတ်ကြိုက် လိုးတာ
ခံရမယ် ..သဘောတူလား ..”
ကောင်မလေးက ခေါင်းညှိတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း သေချာအောင် ထပ်မေးသည် ။ တင်မေခက်
ခေါင်းငုံ့ထားရက်က ခေါင်း ထပ်ညှိမ့်ပြသည် ။
“ ခေါင်းချည်းဘဲ ညှိမ့်ပြမနေနဲ့လေ ..ပြောစရာ ရှိတာကို ပြောစမ်းပါအုံး …ကဲ..ပြော…တပတ် ဘယ်နှစ်ရက်လောက် အလိုးခံမှာလဲ…”
တင်မေခက် မျက်နှာကြီး ရဲတက်သွားသည် ။ မယားပါသမီး ရဲ့ ရှက်မျက်နှာကို ကိုစိုးထူး ကောင်းကောင်း မြင်ရသည် ။ ကောင်မလေးအတွက် အတော့်ကို အဖြရခက်တဲ့ မေးခွန်းပါ ။ သို့သော်
မဖြေလို့ကလည်း မဖြစ်သောကြောင့် တင်မေခက်သည် ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားကာ ရှက်အားပိုပိုနဲ့ပင် လက်တချောင်းထောင်ပြလိုက်ရရှာသည် ။
“ ဟာ..ငွေငါးသိန်းကြီး ပေးထားပြီး..တပတ်တရက်ပဲ
လိုးရမှာကိုတော့ ..မဟုတ်သေးပါဘူး …ခက်ခက်ရာ ..လေးရက်လောက်တော့ ခံကွာ….ဟုတ်လား…”
လမ်းဘေးဈေးသည် ဆီမှာ ဈေးဆစ်သလိုမျိုး ငနသဲားက လုပ်နေသည် ။
ပထွေးနဲ့ အလိုးခံရမယ့်ရက် အတိုးအလျော့ စကားဆိုနေရသည့် မယားပါသမီးမှာ မျက်နှာအရမ်းပူနေသည် ။စိတ်လဲ လှုပ်ရှားနေသည် ။ တင်မေခက်သည် အားတင်းကာ လက်နှစ်ချောင်း ထောင်ပြ
“ နှစ်ရက်ကတော့ နည်းတယ်ဟာ..သုံးရက် ဆိုရင်ကော …”
တင်မေခက် ခေါင်းကို ခါယမ်းပြသည် ။
ကိုစိုးထူးက တချက်တွေကာ စဉ်းစားလိုက်ပြီး ..“ ဒီလို လုပ်ဟာ ..ယေဘူယျအားဖြင့် တပတ်ကို နှစ်ရက် ချဖို့ ငါလက်ခံတယ် ..ဒါပေမယ့် ငါ့စိတ်သိပ်ထလာပြီး နင့်ကိုမှ မလိုးရရင် မနေနိုင်အောင်
ဖြစ်နေတဲ့ အခါတွေ ဆိုရင်တော့ လိုးရမယ့်ရက် ပြည့်သွားပေမယ့် နငက် လိုက်ကုန်းပေးပါ ..ဟုတ်လား ….”
ကိုစိုးထူးရဲ့ ဈေးဆစ်လာမှု နဲ့ ပတ်သက်လို့ တင်မေခက် အနေဖြင့် လက်ဟန်ခြေဟန်မျှနဲ့ ပြန်အဖြေပေးလို့ မဖြစ်နိုင်တော့ ။ ရှင်းအောင် ပြောရဆိုရဖို့ လိုအပ်လာပြီ ။
“ ဟို..အဲ….အပတ်တိုင်း ..အဲလိုမျိုး ..ဟိုဒင်း ….”
အတင်း အားခဲကာ ပြောသော်လည်း တိကျသော စကားများကို ပြောမထွက် ။ အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ ဖြစ်လျက် မျက်ရည်တွေလည်း ရစ်ဝဲလာသည် ။
“ ဘာလဲ..ငါက တပတ် သုံးရက် လိုးဖြစ်သွားအောင် ဖန်မယ်လို့ ပြောချင်တာလား ..”
တင်မေခက်လည်း မျက်နှာပူလှပြီ ဖြစ်လို့ ခေါင်းကို အမြန်ညှိတ်လိုက်ရသည် ။
“ ဟုတ်ပြီ ..ဒီအပေးအယူ ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အထိ အတည်
တင်မေခက် ချိန်ဆ တွက်ချက်ရလေပြီ …။
“ သုံးလ …”
ကိုစိုးထူးမှာ နှာခေါင်း ရှုံ့သွားသည် ။
“ ဟာ…အဲဒီလောက် အချိန်လေးက ဘာများ ရှိမှာလဲဟ ..မဟုတ်သေးပါဘူး ….”
“ ကဲ..လေးလ…အသားကုန်ဘဲ …”
တင်မေခက် ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောရသည် ။
မိမိကို ပထွေးက လိုးချင်နေတာကို တင်မေခက် သိသည် ။ တင်းထားနိုင်လျှင် ပထွေး အလျှော့ပေး လက်ခံရမည်ဟုလည်း တွက်မိသည် ။
“ ကောင်းပြီ ..နင်ပြောသလို အချိန်လေးလဘဲထား ..တပတ်ကိုတော့ သုံးရက်
အလိုးခံရမယ် ..ငါ့စိတ်ကြိုက် အစုံ လုပ်ချင်တာအားလုံး နင် လိုက်လျောရမယ် ..ဘယ့်နှယ်လဲ..နင်
လက်မခံနိုင်ရင်တော့ ငါ့ကို ဘာမှ ဆက် ပြောစရာ မရှိတော့ဘူး …”
ကောင်မလေး သဘောတူ လက်ခံလိုက်ပြီးသည့်နောက် ကိုစိုးထူး အသေအချာ ပငို န် ငိုေ်အာင် တုပ်ချည်လိုက်လေသေးသည် ။ တင်မေခက် ခေါင်းညှိတ်ရသည် ။ ကိုစိုးထူးက စာရက်ွတရွက်ပေါ်တွင်
အချိန် လေးလ ..တပတ်၃ရက်..စိတ်ကြိုက် အကုန်အစုံ ဟု စာရေးကာ မယားပါသမီးကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းသည် ။
စရံသတ်သည့်သဘောနဲ့ သူ့ထံတွင် ပါသော ငွေတသိန်းကို တင်မေခက်အား ပေးသည် ။ ကျန်ငွေများကို မနက်ဖန်ပေးမည် ဟု ဆိုကာ နှစ်ယောက်သား လူချင်းခွလဲိုက်ကြသည် ။ လူချင်းမခွမှဲီ အမြည်း
ဟုဆိုကာ တင်မေခက်ကို ပွေ့ဖက် နမ်းစုတ်ကာ ဖင်ပွတ် နို့ကိုင် လုပ်လိုက်သေးသည် ။
နောက်တနေ့ နေ့လည်ဘက် ကွန်ပြူတာသင်တန်း အဆင်းတွင် တင်မေခက်သည် ခါတိုင်းလို အိမ်သို့ မပြန်တော့ဘဲ ပထွေး ကြိုတင် ချိန်းထားရာသို့ သွားရလေသည် ။ လမ်းမတော်ဘက်ရှိ
တည်းခိုရိပ်သာတခုသို့ ဖြစ်သည် ။
မမိအတွက် အရမ်း လိုအပ်နေတဲ့ ငွေကြေးအားလုံး ပထွေးထံမှသည်နေ့ရမည်ကို သိသလို သူမဘက်ကလည်း သူမရဲ့ တကိုယ်လုံးကို ပထွေး လိုရာ သုံးရအောင် “ပုံ” အပ်ရတော့မည်ကိုလည်း
တင်မေခက် နားလည်သည် ။ တည်းခိုရိပ်သာ အခန်းတခန်းတွင် ချိန်းဆိုခြင်း သဘောကပင် ရှင်းနေသည် မဟုတ်ပါလား ။ သည်နေ့တွင် တင်မေခက်သည် ခါးတိုစပို့ရှပ် ကိုယ်ကြပ်နဲ့ မီနီစကပ်တိုလေး
ဝတ်ထားသည် ။ ခါးတို စပို့ရှပ်သည် မီနီစကပ် ခါးစည်းနေရာနှင့် အံကိုက် ထိမိရုံသာ ရှိလေရာ ကိုယ်ဟန် အနည်းငယ်မျှ လှုပ်ရှားရုံနှင့်စပို့ရှပ်လေးရဲ့ အောက်စ ခပ်လန်လန် ဖြစ်ကာ ဘိုက်သား
ခါးသားများ ဖွေးကနဲ လက်ကနဲ ပေါ်သည် ။ လှုပ်ရှားမှု များရင်တော့ ခါးပေါ် ချက်ပေါ်ကို ဖြစ်သည်
။ မီနီစကပ်ကလည်း ပေါင်လည်လောက်အထိပင် မရှည် ။ပေါင်ရင်းသားသာသာလောက်သာ ဖုံးကာ
ထားလေရာ တုတ်ဖြိုးသော ပေါင်တန်ပေါင်သားများ ပေါ်နေသည် ။
ခြေအမြှောက်တွင် ဆိုလျှင် ဝတ်ထားသော အတွင်းခံပင်တီဘောင်းဘီ အနက်လေးကိုပင် မြင်နိုင်လေသည် ။
အခန်းကြိုတင် ငှားရမ်းထားသည့် စာရက်ွကို ဧည့်ကြိုကောင်တာတွင် ပြလိုက်ရာ ချိန်းဆိုထားသည့်နေရာ ဖြစ်သော တည်းခိုခန်းသို့ အလွယ်တကူ တက်သွားခွင့် ရသည် ။ထို တည်းခိုရိပ်သာက
သုံးထပ်ဖြစ်ကာ တင်မေခက် သွားရမည့် အခန်းက အပေါ်ဆုံးတွင် ရှိလေသည် ။ တည်းခိုရိပ်သာ အပေါ်ဆုံးထပ်သို့ လှေကားမှ တက်လာရင်း တင်မေလတ်ရဲ့ စိတ်အစဉ်သည် ထူးခြားစွာပင် လှုပ်ရှား
ချိန်းထားသော တည်းခိုခန်း အရှေ့ကို တင်မေလတ် ရောက်လာသည် ။ အခန်းတံခါး ပိတ်နေသည်
။ အခန်းထဲတွင် ပထွေးကိုစိုးထူး ရောက်နှင့်နေကာ မိမိကို စောင့်နေသည်ကို တင်မေလတ် သိသည်
။ အခန်းတံခါးရှေ့တွင် တင်မေလတ် ရောက်လာကာ တံခါးကိုခေါက်ရန်ပင် ချီတုံချတုံ နဲ့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း ကိုစိုးထူး တွေ့မြင် သိရှိနေသည် ။ ထို့ကြောင့် တင်မေလတ်
တံခါး ခေါက်လိုက်သည် ဆိုသည်နှင့် အဆင်သင့် ရှိနေသော ကိုစိုးထူးက ချက်ချင်း တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေတော့သည် ။
တံခါး ဖွင့်ပေးပြီးနောက် ကိုစိုးထူးက ပြောလိုက်သည် ။ သူ့မျက်လုံးတွေကတော့
သူလိုးရတော့မည့် မယားပါသမီးရဲ့တကိုယ်လုံးကို ပိုင်နိုင်စွာ ကြည့်သည် ။ အကြည့်ရဲရဲများသည်
တင်မေလတ်ရဲ့ နိုးထနေသော ရမက်စိတ်ကို ပမိုို ပြင်းပြလာစေသည် ။ကောင်မလေးသည် ပထွေးရှေ့မှ ခေါင်းလေးငုံ့ကာ အခန်းထဲ ဝင်သည် ။ ကိုစိုးထူးက သူ့ရှေ့မှ ဖြတ်သွားသော မယားပါသမီးရဲ့
ဖင်ဆုံကြီးကို ညာဖက်လက်ဝါးဖြင့် ခပ်ဆတ်ဆတ် တချက်ပုတ်သည် ။
“ ဖတ်…အို…အမေ့ …”
ဖင်ပုတ်လိုက်သံနဲ့ အတူ တင်မေခက်ရဲ့ ပါးစပ်မှ ရေရွတ်သံလေး ပေါ်ထွက်လာသည် ။ သူလိုးတော့မည့် မိန်းမအဖြစ် ပထွေးက အပိုင် သတ်မှတ်ကာ မိမိကို ဖင်ပုတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အထာပေါက်
နားလည်သည့် တင်မေခက် ရင်တွေ ဖိုမောဟိုက်သွားသည် ။ ကိုစိုးထူးသည် မယားပါသမီးရဲ့ ဘယ်ဖက် ဖင်သားခြမ်းကြီးကိုလည်း ခပ်တင်းတင်း ကိုင်ညှစ်လိုက်သည် ။
“ သွားလေ ခက်ခက်ရဲ့ …” လို့ ကိုစိုးထူးက ပြောလိုက်သည် ။ ပြီးတော့ ခုတင်ကြီး ရှိရာသို့ အသာပင် လျှောက်လှမ်းသွားသည် ။ တင်မေခက်မှာတော့ ရင်သိမ့်ဖိုမောစွာ ဖြင့် နေရာတွင် ရပ်မြဲ
ကောင်မလေး စိတ်အရမ်း လှုပ်ရှားနေသလောက် ကိုစိုးထူးကတော့ ခပ်အေးအေးပင် ..။
“ ခက်ခက်…လာလေ..ခုတင်ပေါ် တက်…..”
ကိုစိုးထူးရဲ့ လှမ်းခေါ်လိုက်သံသည် တင်မေလတ်ကို ဆတ်ကနဲ တုန်သွားစေသည် ။ အလိုးခံဖို့ ခေါ်ခြင်းမို့ ကောင်မလေး ရဲ့ မျက်နှာ ရဲကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။
“ နင့်စပို့ရပ်ှအောက်နားကို ဒီနားလောက်အထိ လိပ်တင်လိုက်စမ်း…..”
ကိုစိုးထူးက ခပ်ပိုင်ပိုင် အမိန့်ပေးလိုက်သည် ။
“ ရငှ်….”
တင်မေခက်သည် ပထွေးကို အခန့်တကြား ကြည့်မိသည် ။
“ စပို့ရှပ် အောက်နားကို လိပ်တင်လိုက်လေ …ခိုင်းတာလုပ်စမ်း …ငါ့စိတ်ကြိုက် အကုန် လုပ်ပေးမယ်လို့နင်ကတိပေးထားတာနော် …..”
ကိုစိုးထူးရဲ့ စကားတွေက ပငို န် ငို လ်ာသည် ။
တင်မေခက်လည်း အရမ်း ရှက်နေသည့်ကြားကပင် ပထွေး ခိုင်းသည့်အတိုင်း လုပ်ပေးရသည်
။ထိုသို့ လိပ်တင်လိုက်သောအခါ ဘိုက်သားလေးလုံးသာသာလောက် အဖွေးသားပေါ်သည် ။
ချက်နက်နက်လေးကိုလည်း မြင်ရသည် ။ သည်လို ကိုယ်ပေါ် ချက်ပေါ်ဖြစ်အောင် လပ်ခြင်းသည် ဘာမှ မဟုတ်လို့ ထင်သော်လည်း တကိုယ်လုံး ချွတ်ပြခိုင်းခြင်းသည်ထက်တော့ ပိုလို့ သာသွားသည်
။ ပြောင်ရှင်းနေအောင် ချွတ်ပြသည်က တမျိုး ရမက်ထန်စေသလို သည်လိုမျိုး မပေါ့်တပေါ် လှစ်ပြစေမှုကလည်း တမူဆန်းသော စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ရစေသည် ။ ထို့ပြင် ဒီလို လုပ်ဆောင်မှု သည်
တင်မေခက်အား မမိစေခိုင်းသမျှ နာခံကျိုးနွံရန် ပမာဏပျိုး လေ့ကျင့်သည့် အထာလည်း ဖြစ်သည် ။
“ စပို့ရှပ် ချွတ်လိုက် …ဘရာစီယာ အနက်ရောင်က နင့အသားနဲ့
အပြတ်လိုက်တာဘဲ ..အောက်ခံဘောင်းဘီရော ဝတ်ထားလား …”
တင်မေခက် ငမိဲု့မဲ့ ဖြစ်လျက် ခေါင်းလေးညှိမ့်ပြရှာသည် ။
“ အောက်ခံဘောင်းဘီကကော ဘာရောင်လဲ…”
“ အနက်..အနက်ရောင်ပါဘဲ ….”
“ ဟုတ်လား ..ဒါဆို ပိုမိုက်တာပေါ့….ကဲ…စကပ်ကို ချွတ်လိုက်စမ်း …”
တင်မေခက်ရဲ့ တကိုယ်လုံး ရဲတွတ်သွားရပြန်သည် ။ ပထွေးခိုင်းသည့်အတိုင်း လုပ်ရရှာသည် ။ ချွတ်ထားပြီး ဖြစ်သော စပို့ရှပ်ကို နီးရာ ခုတင်ခြေရင်းပေါ် ပစ်တင်လိုက်သည် ။
ထို့နောက် အောက်ပိုင်းတွင် ဝတ်ထားသော မီနီစကပ်လေးရဲ့ ခါးးစည်းချိတ်ကို ဖြုတ်သည် ။ ဘေးဇစ်ကို ဖွင့်သည် ။ ပြီးတော့ အောက်ကို တွန်းချ ချွတ်သည် ။မီနီစကပ်လေး သည် တိုတိုကြပ်ကြပ်လေး
ဖြစ်ပေရာ ချိတ်ဖြုတ်ဇစ်ဖငွ့်ထားပြီးသည်တိုင် အတော်ပင် တွန်းချချွတ်ရသည် ။ ထိုစကပ်လေးကိုလဲ ခုတင်ခြေရင်းတွင်ပင် တင်ထားလိုက်သည် ။
ဘရာစီယာနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ခိုင်း အုံးမှာလား ဟု တွေးနေရင်း မျက်နှာ အထားရ ခက်နေသည် ။
ချွတ်ခိုင်းရင် ငြင်းရန် မဖြစ် ..။ချွတ်ပေးရမည်ကို သိသည် ။ ပထွးရဲ့ စူးစူးရဲရဲ ကြည့်နေသော မျက်လုံးအောက်တွင်ဗလာကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်အောင် ချွတ်ပြရမည်ကိုတော့ ကောင်မလေးမှာ အရမ်းကို
“ ဟို စားပွေဲ ပ်ါမှာ ရှိနေတဲ့ ပုလင်းထဲက ဖျော်ရည်တွေကို ဖန်ခက်ွတခွက်မှာ ထည့်ပြီး ယူလာခဲ့…”
“ အဲဒါ မြူးကြွဖျော်ရည်လို့ ခေါ်တယ် ..သောက်လိုက်ရင် ရှက်သလိုလို တွန့်တွန့်သလို ဖြစ်နေတာတွေ ပျောက်ပြီး စိတ်တွေ ညမူးကြွပျော်ရွှင်လာမယ်..သောက်လိုက်…”
ဖန်ခက်ွထဲရှိ ဖျော်ရည်အားလုံး ကုန်အောင် သောက်ချလိုက်ပြီးသောအခါတွင်တော့ မမိ ရိဲ့ တကိုယ်လုံး ဖြိုးကနဲ ဖျန်းကနဲ ဖြစ်သွားသယောင်ယောင် တင်မေလ=ခက်ခံစားလိုက်ရသည် ။
စိတ်လက်ပေါ့ပါးလာသလိုလိုလည်း ရှိသည် ။
“ လာ..ခုတင်ပေါ်တက်လေ …”
ကိုစိုးထူး က ခုတင်ပေါ် တက်လာသော မယားပါသမီးကို ဆီးလို့ ပွေ့ကာဖက်သည် ။ ညာလက်ဖြင့် နို့တွေကို ဆုပ်နယ်သည် ။ ဘယ်လက်က တင်ပါးကို ပွေ့သည် ။
တင်မေခက် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုံနေသည် ။
“ ပါးစပ်ဟထား ..လျာလေးလဲ တစ်လစ်ထုတ်ထား….”
ကိုစိုးထူး ငခုဲံစုတ်နေမှုကို ခဏရပ်ကာ ပါးစပ်ချင်းလည်း အသာခွာ ပြီး ပြောသည် ။ ကိုစိုးထူး စေစားသမျှကျိုးနွံနာခံနေရလေပြီ ဖြစ်သော တင်မေခက်သည် ပထွေး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်သည် ။
ပါးစပ် ဟကာ လျာလေး ထုတ်သည် ။ တစ်လစ်လေး ထွက်လာသော တင်မေခက်ရဲ့ လျာနီနီလေးကို ပထွေးက ဆတ်ကနဲ စုတ်သည် ။ ပြီးတော့ လျာချင်း ဖိပတ်ွသည် ။ ထို့နောက် သူ့လျာကြီးကို
မယားပါသမီးရဲ့ပါးစပ်လေးထဲကို ထိုးထည့်ကာ မွှေကလိလေတော့သည် ။ ကောင်မလေးမှာ အားပြင်းပြီး ရမက်ထန်သော လျာသရမ်းမှု အစုတ်အနမ်း တွင် ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထနေရလေသည်
“ နင့်နို့ကြီးတွေက တကယ်ထွားတာကိုး..နင့်ရင်တိုင်း ဘယ်လောက်ရှိလဲ….”
လျာနှင့်အပြတ်ထိုးကလိ စုတ်နမ်းပြီးနောက် ကိုစိုးထူးက ပါးစပ်ချင်းခွာကာ ပြောသည် ။ လက်နှစ်ဖက်ကတော့ မယားပါသမီးရဲ့စနေနှစ်ခိုင် အသားစိုင်ကြီးများကို ဆုပ်နယ်နေသည် ။
“ ခစခ် စ်..သုံးဆယ့်ငါး ရှိတယ်..ဦးလေးရ …”
တင်မေခက်က ရယ်သံလေး ပြုကာ ပြောသည် ။ရှက်ရယ်ရယ်မှုလို့ ဆိုနိုင်သလို ပထွေးရဲ့ အစုတ်အနမ်း အကိုင် အပွတ်တို့ ခံရပြီးသည်မို့ ရဲတင်းလာကာ ရယ်သံထွက်လာသည်ဟုဆိုလည်း ပြော
“ ဒါဆိုရင် နင့်ခါးက နှစ်ဆယ့်နစ်ှရှိလိမ့်မယ်..ဟုတ်လား ….”
ကိုစိုးထူးသည် မယားပါသမီး အကြီးမ ရဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည်ကြီးကို ( ၃၅-၂၂၃၆ ) ရှိလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားခဲ့သည် ။ ရင်နဲ့ တင်တို့က
ခါးအတိုင်းအတာကိုလည်း အပိုင်ပြောချလိုက်သည် ။
“ ဟာ..မဟုတ်ဘူး…နှစ်ဆယ့်သုံး ရှိတာ…”
“ နင်..အလိုးခံဘူးလား …..”
“ ဟာ..ဦးလေးကလဲ..ဘာတွေ လာမေးနေတာလဲ မသိပါဘူး ….”
“ နင့်ကို လိုးတဲ့အခါ အဆင်ပြေရအောင် ကြိုမေးထားတာပါ ….နင်အလိုးခံဘူးပြီးသားဆိုရင် တမျိ
ုးလိုးမှာ….အလိုးမခံဘူးသေးဘူး..အခုမှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် စအလိုးခံရတာ ဆိုရင်တော့ တမျိုး လိုး
“ နငန်ဲ့ ငါနဲ့ အခုဆို လိုးကြတော့မှာ..ငါ့ကိုများ ဘာရှက်နေစရာ လိုသေးလဲ….”
“ ဟို…ပါးစပ်က ပြောမထွက်ဘူး…ဦးလေးရ…တကယ်ဘဲ….”
“ ပါးစပ်က ပြောမထွက်ရင် ခေါင်းငြှိမ့် ခေါင်းခါ လုပ်ပြ …..”
တင်မေခက်မှာ ခေါင်းလေး ခါရမ်းပြသည် ။
“ အလိုးခံဘူးပြီးသား ဆိုရင် ငါအကုန်ခိုင်းပြီး တန်းလိုးပစ်မလို့….အခု နင်က အလိုးမခံဘူးသေးတဲ့ အပျိုစစ်စစ်လေး ဆိုတော့ နင့်ကို အလိုးခံချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပေါ်လာအောင် အရင် လုပ်မယ်…ပြီးမှ
ကောင်မလေး ယောင်ပေါင်ပြီး ခေါင်းညှိမ့်လိုက်မိပြန်သည် ။ ကိုစိုးထူးက ဘယ်လိုလုပ်မည် ဘယ်လို အဆင့်ဆင့်တက်မည် ဆိုခြင်းကို တင်မေခက် ကောင်းကောင်း နားမလည်ပါ ။ ကြိုက်သည်
မကြိုက်သည် ဝေခွဲ ဆုံးဖြတ်ရန်ကား ဝေးလေ သည် ။
“ ပြစမ်း..နင့်စောက်ဖုတ် စမ်းကြည့်ရအောင် …”
ပြောပြောဆဆိုို ညာလက်က မယားပါသမီးရဲ့ ပေါင်ကြားကို နှိုက်လာသည် ။
တင်မေခက်သည် သူမရဲ့ ပေါင်ကြားကို ကိုင်စမ်းလာသော ကိုစိုးထူးရဲ့ ညာလက်ကို ဆွဖဲ ယ်တွန်းသည် ။ အလိုးခံရန် သဘောတူလို့ခုတင်ပေါ်အတူ ရောက်နေလေပြီ ဖြစ်ရာ လိုးမည့်စောက်ပတ်
ကိုင်စမ်းတာလောက်ကို တွန့်တို ပြင်းဆန်ရန် အကြောင်းတော့ မရပှိါ။ သည်လိုမျိုး မတွေ့ကြုံဘူးသေးသည့် အပျိုရိုင်းစိတ်ကြောင့် အလိုလို ငြင်းမိ ဖယ်မိခြင်း ဖြစ်သည် ။
ပြောရမည် ဆိုရင် တင်မေခက်ရဲ့ စောက်ပတ်မှာ ကိုစိုးထူးရဲ့ လက်နှင့် “ အစိမ်းသက်သက် ” လို့
ပြောလို့ မရပါ ။ ဟိုနေ့က ဘတ်(စ် )ကားပေါ်တွင် နှိုက်ကိုင်ဘူးခဲ့ပြီ မဟုတ်လား …။
ကောင်မလေး ဆွဖဲ ယ် တွန်းသော်လည်း ကိုစိုးထူးရဲ့ လက်က ပေါင်ကြားက ခွာမသွား ။ တင်မေခက်ရဲ့ စောက်ပတ်ကို အတွင်းခံဘောင်းဘီအပေါ်က နေပြီး ကျကျနန အုပ်ကိုင်မိပါသည် ။
အောက်ခံဘောင်းဘီ ကြားခံရှိနေသော်လည်း စောက်ပတ်မို့ဖေါင်းဖေါင်း အရည်ရွှမ်းနေသည့် အထိအတွေ့ကိုတော့ကိုစိုးထူး သိရှိလိုက်သည် ။
“နင့်စောက်ပတ်က ဖေါင်းပြီး စောက်ရေကြည်တွေ တော်တော် စိုနေပါလား..ဒါဆို နင့်ကို အလိုးခံချင်စိတ်တွေ ထလာအောင် လုပ်ဖို့ မခက်တော့ပါဘူး ….ကဲ ပက်လက်လှန်လိုက် ….”
ပါးစပ်ကလည်းပြော လက်ကလည်း ကောင်မလေးကို ကိုင်ကာ ခုတင်ပေါ် ဆွလှဲချသည် ။ တင်မေခက်တယောက် ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်သွားရလေသည် ။
မမိအပေါ်က တက်ခွ လိုးတော့မှာမို့ ပက်လက်လှန် အိပ်ခိုင်းခြင်းလား ဟု တင်မေခက် တွေးသည် ။ ရင်တလှပ်လှပ် ဖြစ်နေသည် ။
“ နင့်ပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းကို ကားလိုက်..ခပ်ကားကား ထုတ်လိုက်စမ်းပါ ..ဟောဒီလို မျိုး . .”
မယားပါသမီး က မရဲတရဲနှင့် ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း မရတဲရဲ ကားပေးရာ ပထွေးက ကောင်မလေးရဲ့ ခြေကျင်းဝတ်နှစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကိုင်ကာ ရက်ရက်ရောရော ဆြွဲဖဲကား
ထုတ်လိုက်သည် ။ တင်မေခက်ရဲ့ ပေါင်ကြီး နှစ်ချောင်း အသားကုန် ဆိုသလို ကားထွက်နေသည် ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ အောက်က စောက်ဖုတ်ကြီးသည် ဖထစ်လိုက ဖေါင်းတက်နေသည် ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီရဲ့ ခွကြားနေရာ ( စောက်ဖုတ်အပေါ်တည့်တည့် )တွင် အရည်ကြည်များ စို့နေသည်မှာ အပီကို မြင်သာ သည် ။
အတွင်းခံဘောင်းဘီ ရှိနေသေးသော်လည်း ပေါင်ကြီးတွေ ကားထွက်အောင် အဖြဲခံရသောအခါ တင်မေခက်သည် လက်ဝါးနှစ်ခု ဖြန့်လျက် ပေါင်ရင်း ခွကြားတွင် အုပ်ကာလိုက်မိသည် ။
“ ဟာ..လက်က ဘာကြောင့် စောက်ပတ်အပေါ်မှာ လာအုပ်ထားရတာလဲ …ရော့ ..ဒီပေါင်ကြီး
နှစ်ခုကို ကားထွက်နေအောင် ကိုင်ထိန်း ထား ….”
ကိုစိုးထူးသည် ဖြဲထုတ်ထားသော တင်မေခက်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကွေးလျက် တွန်းတင်သည် ။ ဒူးခေါင်းများကို ကောင်မလေးရဲ့
ဖိတွန်းတင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည် ။ တင်မေခက်လည်း မမိ ရိဲ့ ဒူးခေါက်ကွေးများကြားမှ လက်နှစ်ဖက်ကို လျှိုသွင်းကာ ကိုယ့်ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်အပေါ် ကိုယ့်လက်ဝါးများဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထိန်းပေး
ထားလိုက်ရသည် ။ ကိုစိုးထူး က တင်မေခက်ရဲ့ လက်များကို အလိုက်သင့် ဆွယဲူ ပြုပြင်ပေးသည်
ပြီးတော့ မယားပါ သမီးရဲ့ ခြေရင်းမှာ ဝမ်းလျားမှောက်ချကာ သူ့မျက်နှာကို ပေါင်ရင်းခွပေါ် အပ်ချသည် ။
“ ဟာ…ဦးလေး ….မလုပ်နဲ့….အဲဒါ မလုပ်နဲ့ ……ဟာ…..ပြောလို့လဲ မရဘူး …..အိုး..အမေ့ ……မလုပ်ပါနဲ့ဦးရာ….ကျမ ငရြဲကီးကုန်တော့မှာဘဲ …အို…အို….အို …ရွံလဲ မရွံဘူး …..
တင်မေခက်သည် ကာမကိစ္စပိုင်းမှာ အတွေ့အကြုံ မရှိလှသ်ာလည်း သူမရဲ့ မိခင်နဲ့ ပထွေးတို့ ကာမမှု ပြုကြရင်း အပြန်အလှန်ပြောဆိုသည့်စကားများ…ကြားရသော အသံများကြောင့်
စောက်ပတ် ယက်ပေးသည့် အထာကို သိနေသည် ။ ယခု ပထွေးက မမိေိ စာကပ် တက်ို ယက်တော့မည်ဟု နားလည်သည်နှင့် ကမန်းကတန်းပင် ကန့်ကွက်စကား ဆိုလိုက်ရှာသေးသည်
ထိုသို့ စကား အဆိုမှာပင် ပထွေးရဲ့ ပါးစပ်က သူမ စောက်ပတ်အပေါ် ကျရောက်လာသည် ။
ကိုစိုးထူးက အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို လျစ်ကနဲ တိုးထိုးလိုက်ရာ ဘောင်းဘီခွဆုံအသားလိပ်မှာ ညာပေါင်ရင်းအနား ကပ်သည် ။ စောက်ပတ်သည် အကာအကွယ် လုံးမ မရှိဘဲ အပြူး
သား ပေါ်လာကာ ထိုအဖုတ်ပေါ်သို့ သူ့ပါးစပ်က ကျကျနန အပ်ကျခြင်း ဖြစ်လေသည် ။ လျာကိုလဲ ဆန့်ထုတ်လိုက်လေရာ အဖုတ်နဲ့ ပါးစပ် မထိတထိကပင် လျာဖျားက အရင်ထိသည် ။
တံတွေးများ စိုနေသော လျာနှင့် စောက်ရေရွှမ်းနေသော စောက်ပတ်တို့ ထိတွေ့လိုက်သောအခါ တင်မေခက် ခမြာ တကိုယ်လုံးရှိ အကြော အသွေးအသားတွေ အီဆိမ့်ကုန်အောင်ပင်
ထူးခြားပြင်းထန်သော ဖီလင်ကို ရင်လှိုက်မောဘွယ်ရာ ခံစားရလေရာ ကန့်ကွက်ငြင်းဆန်သည့် စကားများနဲ့ အတူ ရမက်ဇော ဝုန်းကနဲ တက်လာမှုရဲ့ ရေရတ်ွမြည်တမ်းသံများကလည်း
ကိုစိုးထူးသည် မယားပါသမီးရဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ကျကျနန ဆြွဲဖဲကာ လျာကို
စောက်ပတ်အကွေဲ ကြာင်းပေါ်ထိ အပ်ကာ တဆတ်ဆတ် လှုပ်ရှားရင် ယက်ပေးသည် ။
တင်မေခက် ခမြာမှာ တော့ပျံလန်နေသည် ။ဖင်ကြီးဆိုလျှင်မွေ့ယာပေါ်မှ ကြွတက်ချက် ကော့ကော့ ပင့်ပေးသည် ။စောက်စေ့ဆိုလျှင် အက်ကွေဲ ပါက်ထွက်လုမတတ် ကော့ထောင်တက်
သည် ။ ကိုစိုးထူးက ထောင်တက်လာသော စေက်စေ့ကို နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ ညှပ်ခါ စုတ်သည် ။
“ အားပါးပါး . . .အီး….အား…..ဘယ်လိုလပ်နေတာလဲ
ဦးလေးရဲ့ …ယားတယ်ရှင့်…ယားတယ် …..အိုး…ကြည့်ပါလား…ယားပါတယ်လို့
အပျိုစစ်စစ် စောက်ပတ်လေးမို့ နုသစ်ကာ သန့်နေသည် ။
ထပ် ထွက်လာသော စောက်ရေကြည် အနံ့ကလည်း ညှီတိတိ..မွှေးတေးတေး ….။
စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းကြီးများသည် ဖုထစ်လို့ ဖေါင်းနေကြသည် ။ ထိုစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား ဖုဖုထစ်ထစ်များကို ကိုစိုးထူး က ပါးစပ် ဖညင့် ငခုဲံစုတ်ပေးလိုက် လျာဖြင့် လှည့်မွှေယက်လိုက်
မကြာပါ…တင်မေခက်တယောက်..ပထွေးရဲ့ စောက်ပတ် ယက်ပေးမှု အောက်တွင် အရှက်အကြောက် ကင်းမဲ့စွာ ဖီလင်များ တက်လာလေတော့သည် ။ ကောင်မလေး ထွန့်ထွန့်လူး ကော့ပျံလေသောအခါ ကိုစိုးထူးက စောက်ပတ် ယက်နေသော လျာကို အောက်သို့ အသာ လျောချကာ စူတူတူ စအိုပေါက်ကို ပျပ်ကနဲ မြည်အောင်
“ အို..အ….အဲဒါ ဖင်ကြီး…..ဦးလေးရ…….ဟာ….ဟာ………..”
စအိုကို အယက်ခံလိုက်ရသောအခါ တင်မေခက် ဖင်ကြွရင်း ကော့တက်ပြီး အလန့်တကြား
ပြောသည် ။ ကိုစိုးထူးက လျာကို ဆန့်ထုတ်ကာ စအိုပေါက်ထဲကို လျာ ထိုးသွင်းပြန်ထုတ် အပြတ်
ထိုးကလိပေးလေရာ တင်မေခက် မခံနိုင်တော့ ။ ခေါင်း ဘယ်ညာ ခါယမ်းကာ လူးလှိမ့်
ပါးစပ်မှလည်း ရမက်ပြင်းပြင်းနဲ့ မြည်တမ်းသံတွေ တရစပ် ပေါ်ထွက်နေသည် ။
တင်မေခက် ပြီးလုလုပင် ဖြစ်လာသည် ။ ကိုစိုးထူးက မယားပါသမီးကို “ ပြီး ”သွားအောင်အထိ အဖုတ်ယက် ဖင်ယက် လုပ်မပေး….။ ဖင်ပေါက်ကို ထိုးမွှေ ယက်နေရာမှ
ချက်ချင်းရပ်ကာ ပေါင်ကြားမှ မျက်နှာ ခွာထုတ်သည် ။
“ ယက်ပေးပါအုံး ဦးလေးရဲ့…ဘာလို့
ရပ်လိုက်တာလဲ …ယက်ပါ…ယက်ပါရှင့်…ယက်ပေးစမ်းပါအုံး…..ကေင်းလွန်းလို့ပါ …..”
တင်မေခက် အငမ်းမရ ပြောသည် ။
ကိုစိုးထူးရဲ့ ခေါင်းကို လှမ်းကိုင်ကာ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ပြန်သွင်းဖို့ပင် ကြိုးစားသည် ။ ကိုစိုးထူးက
ကောင်မလေး ဆွယဲူရာသို့ မလိုက် ..။ လက်ကို အသာ ပင့်ဖယ်သည် ။
တင်မေခက် က လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်နေသော အောက်ခံဘောင်းဘီကို သွက်လက်စွာ ခွတ်ပစ်လိုက်ပါသည် ။
“ ဟေ့..ဘာဖြစ်လို့ အောက်ခံဘောင်းဘီကို ခွတ်ပစ်လိုက်တာလဲ….”
ကိုစိုးထူးက စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ မေးသည် ။
“ ဟာ..ဦးလေးဘဲ…ဟိုဒင်း တော့မယ်ဆို …..”
“ ဘာ ဟိုဒင်းလဲ ကွ…လိုးတော့မယ် လို့ ပြောစမ်းပါ ….”
“ အိုး..အဲလိုမျိုးကြီး မပြောရဲပါဘူး ….”
“ ငါလိုးတော့မယ် ဆိုလို့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ချွတ်လိုက်တာလား ….”
ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာ ရဲကနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ ရမက်ဇောတွေ ထန်ပြင်းကာ အလိုးခံရန် အသင့် ရှိနေသော်လည်း အပျိုရိုင်းမို့ တစ်တစ်ခွခွ စကားကြမ်းကြမ်းတွေကြောင့် ရှက်စနိုးတော့
“ နင့်ဖင်အောက်မှာ ခေါင်းအုံး ထိုးခုရအောင် …ဖင်ကြီးကို အသာကြွလိုက် ……
ဖင်အောက်မှာ ခေါင်းအုံး ခုတော့ …စောက်ပတ်ပိုပြူးပြီး စောက်စိလဲ ပိုပေါ်တယ် ….လိုးရတာ ပိုကောင်းတာပေါ့ ….နင်လဲ အပြတ်ဖီလင် ရမှာ . . . ”
ကိုစိုးထူးလဲ မယားပါသမီးရဲ့ ပေါင်ကြားမှာ စောက်ဖုတ်ကို ကုန်းကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည် ။
“ ကွာ..ဦးလေး…အဲလိုတွေ မပြောနဲ့ ….”
“ ငါက နင်သိရအောင် ပြောတာပါကွယ် ..ကဲ..နင့်စောက်ပတ်မှာ ငါ့လီးကို တေ့ပေးလေ …”
ကိုစိုးထူးက မယားပါသမီးရဲ့ ဗိုက်အပေါ် တက်ခွရင်း ပြောသည် ။
တင်မေခက် လည်း ပထွေးရဲ့ လီးကို လှမ်းကိုင်ကာသူမရဲ့
စောက်ပတ်တွင် စောက်ရေကြည်တွေ စိုရွှေဲ နကာ လီးရဲ့ ထိပ်ဖက် အကွဟဲဟနေရာ တဝိုက်တွင် လည်း ကာမရှေ့ပြေး အရေကြည်လေးများ စို့နေလေရာ
လီးနဲ့ စောက်ပတ် တေ့ထောက်မိသည်နှင့် စိုတိုတို အထိအတွေ့ကို နှစ်ယောက်စလုံး ခံစားရသည် ။ ပထွေးကော မယားပါသမီးပါ ရင်သိမ့်တုန်သည် ။ ပူထူ ရှိန်ူးဖိန်း ကုန်သည် ။
အပျိုစစ်စစ် ပါကင်ပိတ်လေးမို့ ပါကင်ဖွင့် လိုဖူးတာတော့ မရှိသေးပါဘူး …။
ယခု သူ့လီးတေ့ထောက်လိုက်မိသည့် စောက်ပတ်သည် ယင်ဖိုမှ မသန်းသေးဘူးသော အပျုစစ်စစ် အဖုတ် နုနုထွဋ်ထွဋ်လေး ဖြစ်ပေရာ အပျိုစစ်စစ် အဖုတ်ရဲ့ နုသစ်သောထိတွေ့မှုသည် ငနသဲားကို ကောင်းကောင်း ဖမ်းစားနေသည် ။
ထို့ပြင် မိမိလိုးချင်လှလို့ ဂွင်ဖန်ကာ အရကြံထားရတဲ့ မယားပါသမီးရဲ့ စောက်ပတ်လဲ ဖြစ်နေပြန်ရာ..ကိုစိုးထူးအဖို့ အတိုင်းမသိအောင်ဘဲ အတွေ့ထူးကာ အရသာတွေ့ ဖီလင်တက်လို့
ထို့ကြောင့်လည်း လီးတေ့မိတာနဲ့ အားထည့်ကာ ဖိစိုက်ချသွင်းလိုက်ရာ နုနုထွတ်ထွတ် စောက်ခေါင်းပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ ဒစ်ပြဲလန်ကြီး သည် တထစ်ထစ် တိုးဝင်သည် ။
ဒစ်ဖူးကြီး တိုးဝင်လာမှုနဲ့ အတူ ကာမစပ်ရှက်ရာ စောက်ခေါင်းပေါက်ဝသည် အာပွင့်ပြီး ဒစ်ပြဲကြီး တဝက်သာသာ လောက် ဝင်သွားသည် ။ တင်မေခက်သည် စောက်ပတ်တွင် စစ်ကနဲ ကျင်
သလိုလို စပ်သလိုလို ဖြစ်သည် ။
ယောက်ျားတန်ဆာ လိင်တန် ဒစ်ဖျားပိုင်း တိုးဝင်လာလျှင် ဖီလင်အရသာကတော့ကာမမှု အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော အစိမ်းသက်သက် အပျိုမလေးကို တခိုက်ခိုက် ဖြစ်သွားစေပါသည် ။
“ အား..ကျွတ်…ကျွတ်………အင့် …..”
ကိုစိုးထူးရဲ့ လီးက ကြီးမား တုတ်ခိုင်လွန်းသည် ။
ဒစ်ပြဲလန်ကြီးကပင် သုံးလက်မသာသာလောက် ရှိသည် ။ လုံးပတ်ကလည်း ဖင်တက်စီ အချိုရည်ပုလင်း ရဲ့ ဖင်ပိုင်းလောက်ပင် တုတ်လေရာ ထို ဒစ်ပြဲလန်ကြီး ထိုးသွင်းခံရမှုကြောင့်
တင်မေခက်ရဲ့ စောက်ခေါင်းပေါက်သည် အသားကုန်နီးပါးပြဲအာထွက်လျက် အရမ်းလဲ နာသည် ။
ကောင်မလေး ငြိမ်ပြီး မှိန်းမခံနိုင်တော့ …။
“ အား…..အား..နာလိုက်တာ ….သေပါပြီ
ဦးလေးရာ….နာတယ်..သိပ်နာတယ် ….မရဘူး…မဖြစ်ဘူး ….မသွင်းနဲ့တော့….နာ…နာတယ်..နာ တယ်…….”
အပျိုမလေးမှာ လီးဒစ်ကြီး ဝင်လာသည့်ဒါဏ်ကို မချိမဆန့်ခံလျက် အော်ဟစ်ညည်းညူ ကာ ပထွေးရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆီးကာ တွန်းသည် ။
လီးကိုလည်း ဆက်ကိုင်ပေးမထားတော့ ။ မျက်နှာမှာလည်း ရှုံ့မဲ့လျက်ရှိသည် ။
“ ဟင့်အင်း…မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဦးလေးရယ် …နာလွန်းလို့ပါ ..ကျမ
မခံနိုင်တော့ဘူးရှင် …အရမ်းနာလို့ပါ ..တောင်းပန်တာပါ ….ဆက်မသွင်းပါနဲ့တော့ …ဆက်သွင်း ရင် ကျမ ဥစ္စာ
တင်မေခက်သည် ပထွေးကို ဆက်မသွင်းဖို့ တောင်းပန်ရှာသည် ။
နာလဲနာ ကြောက်လဲ ကြောက် ဖြစ်နေသော တင်မေခက်မှာ ထိုဖီလင် အရသာကို မခံစားတတ်သေး ..။ သွေးသားတွေကတော့ လီးရဲ့ အရသာကို ခံစားခြေ ရရှေိ နကြလေပြီ ။
“ ဟေ့..ဘာကြောင့် ပေါင်ကြီးတွေကို လိမ်ထား ရတာလဲ..ပေါင်နှစ်ချောင်း ကားပေးထားမှ
စောက်ပတ်ပြဲလာပြီး အသွင်းရ အဆင်ပြေတာပေါ့ ..ကဲ ပေါင်ကြီးတွေ ကားလိုက်စမ်းပါဟာ..”
“ မကားပါရစေနဲ့..ဦးလေးရာ ..မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်ရှင် ..ဆက်သွင်းရင် ကျမ
သေလိမ့်မယ် ..တကယ်ပြောတာပါ …”
“ လီး အဝင်ချောပြီး အနာသက်သာအောင် ဆီရွှဲရွှဲ ဆွတ်ပေးမယ်လေ ….ဒီ အဆီ ဆွတ်ပြီး သွင်းရင် ရပါတယ် …”
ကိုစိုးထူးသည် ကေဝိုင် ဂျယ်လီဘူးကို ဖွင့်ကာ ညာလက်ဝါးပေါ်တွင်ဆီများညှစ်ချကာ သူ့တောင်မာနေသော လီးချောင်းကြီးတွင် သုတ်လိမ်းသည် ။ တင်မေခက်သည် သူမရဲ့စောက်ပတ်ထဲ
ထိုးသွင်းရ လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် လီးချောင်းကို ဆီဆွတ်နေပုံကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေသည် ။
လီးကြီးက အကြီးကြီး…ဆီသုတ်ပေမယ့် ငါ့ဟာထဲ သွင်းလို့ ရပါ့မလား …ဒါကြီးကို ထိုးသွင်းလိုက်တာ ခံရပြီးရင် ငါ့ဥစ္စာ စုတ်ပြဲသွားမှာဘဲ ….လမ်းတောင်မှ ကောင်းကောင်း လျှောက်လို့
ရပါတော့မလား ….စသဖြင့် အမျိုးမျိုး တွေးတောနေမိသည် ။
ထို့ပြင် ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသည့် လီးချောင်းကြီးရဲ့ ညှို့ယူဖမ်းစားမှု ကိုလည်း ခံနေရလေရာ ကောင်မလေးရဲ့ ကာမ ရမက်ဇော သွေးသားတို့ကတော့ ပူနွေး ထကြွနေကြလေပြီ .
ဆီသုတ်လိုက်သည့်အတွက် ငပေဲ ချာင်းကြီးမှာ အကြောကြီးများ ပိုပြိုင်းပြိုင်း တအားပီပြင် ထင်ရှားလာလေရာ သွေးဆူသော အပျိုမအတွက် ရင်ဖိုပြီးရင်းဖိမောနေရသည် ။ ဆီသုတ်ပြီးပါက ထိုအတန်ကြီးသည် မိမိရဲ့ မိန်းမကိုယ်ထဲ အဆုံးဝင်အောင် ထိုးသွင်ူစပ်ယှက်တော့မှာကို သိနေမှုကလည်း တမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်သည် ။
“ နင့် စောက်ပတ်ထဲ ငါ့လီးကို သွင်းတော့မယ် ..ဒီ ဆီရွှဲရွှဲ သုတ်ထားတာ ဆိုတော့အဝင်ချောမှာပါ …နင်လဲ ကောင်းကောင်း ငြိမ့်မှာ ပါ ….”
ကိုစိုးထူးသည် ဝင်နေသော လီးဒစ်ကိုတပြူတပြု လုပ်ပေးသည် ။ ဖဖိထပ်ထိုးထည့်ရာ လီးက စောက်ပတ်ထဲ ပပိုို တိုးဝင်သည် ။ တင်မေခက် အံကို ကြိတ်ခါ မအော်မိရန် အတင်း ထိန်း
သို့နငှ့် လီးဒစ်ထိပ်ဖူးသည် တင်မေခက်ရဲ့ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲတွင် အုပ်ကာထားလေသော အပျိုအမှေးပါးကို ထိမိထောက်မိ သွားလေသည် ။
ကိုစိုးထူးသည် ထိမိထောက်မိသွားသော အပျိုအမှေးပါးကို လီးထိပ်ဖြင့် အသာ ဖိဖိကြည့်သည် ။ အပျိုအမှေးပါးရဲ့ တင်းရင်းသော ထိတွေ့မှုကို ဖီလင်ယူခြင်း ဖြစ်သည် ။
လီးတန်ကလည်း အဖုတ်လေးထဲ လေးလက်မကျော်ကျော်လောက် တိုးဝင်နေရာ တင်မေခက်အဖို့ ကာမစပ်ယှက်မှု ဖီလင်ကိုလည်း ရရှိ ခံစားရစပြုသည် ။ တဟင့်ဟင့် တအင့်အင့် နငှ့်
“ ဟင့်….အင့်….အင့် …အ…..အ….ဝင်အောင် သွင်းပြီးရင်လဲ ဦးလေးကိစ္စ မြန်မြန် ပြီးအောင် ဆက်လုပ်ပါ ..ကိစ္စပြီးရင် ကျမ ပြန်တော့မယ် ….”
“ အေး ..စောက်ပတ်ထဲ လီး အဆုံးဝင်အောင် သွင်းပြီးရင်
ဆောင့်လိုးရတော့မှာပေါ့ ….ဆောင့်မယ်နော်..ရလား …”
“ အင်း…သိပ်တော့ မကြမ်းနဲ့နော် …”
“ ဘွပ်..ဘု..ဘု…..ဘွပ် …..”
“ အားပါးပါး …ကြည့်ပါလား …ဘာလို့ တအားဖိရတာလဲ…နာတယ်…သိလား ….”
ကိုစိုးထူး က လီးကို တဝက်လောက် ဆွထဲုတ်က အားအပြည့်ဖြင့် ဖိဆောင့်ချ လိုက်ရာ ကောင်မလေး ကော့တက်သွားပြီး ကိုစိုးထူးရဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆီးတွန်းကာ ပြောသည် ။
“ အမလေး…နာလိုက်တာ …သိပ်မကြမ်းပါနဲ့ ရငှ်…”
“ ဘွတ် ဖွတ် ဘွတ် ….”
“ အား…နာတယ်………..ညှာညှာတာတာလေး လုပ်ပါဦး ..ကျမဥစ္စာလေး ကြွဲပဲသွားလိမ့်မယ်ရှင် …”
ကိုစိုးထူးသည် မယားပါသမီးရဲ့ ခြေကျင်းဝတ်နှစ်ခုကို ဘယ်ညာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အပိုင်အနိုင် ကိုင်ကာ ပေါင်တန်ကြီးများ အသားကုန် ကားသွားအောင် ဆြွဲဖဲသည် ။ ပြီးတော့ ဒူးကွေးချကာ
ကားအိသော တင်ပါးဆုံကြီးနှစ်ခုကို အိနေအောင် ဖိညှပ်လျက် လီးကို
ကော့ပင့်တင်လိုက်..ဘယ်ညာလှုပ်ခါရမ်းလိုက် တပတ်မွှေပေးလိုက်နှင့်ပညာသားအပြည့်သုံးကာ လိုးသည် ။
ထိမိသော လိုးချက်များကြောင့် တင်မေခက် ကြက်သီး ဖြန်းဖြန်း ထရသည် ။ နာတာတွေ
ပျောက်ကုန်ကာ ဖီလင်တွေ အပြတ် တက်သည် ။ လူးလွန့် လှုပ်ခါလာသည် ။
အချက်နှစ်ဆယ်ကျော် ဆောင့်လိုးခံရပြီးသော အခါတွင်တော့ တင်မေခက်တယောက် ဖီလင်တွေ အပြတ်တက်ကာ တချီ ပြီးသွားရလေတော့သည် ။
ရမက်ကြွယ်သော မိန်းကလေးမို့ အပြီးလည်း ကြမ်းသည် ။
ပထွေးကို တင်းကြပ်နေအောင် ဖက်သည် ။ ကျောပြင်ကို ကုတ်ခြစ်ဆွသဲည် ။လက်သီးများနှင့်လဲ ထုသည် ။ စောက်ပတ်သည် ပွစိပစွိနှင့် လှုပ်သည် ။ ကိုစိုးထူးကလည်း သူ့လီးကြီးကို
စောက်ပတ်ထဲ ဖိတပ်ထိုးသိပ်ပေးထားသည် ။ ကောင်မလေးရဲ့ နို့သီးခေါင်းနှစ်ခုကိုလည်း လက်ညှိုး လက်မများဖြင့် ညှပ်ကာ ခပ်တင်းတင်း ညှစ်ပေးထားသည် ။
ခဏကြာတော့ တင်မေခက် ငြိမ်ကျသွားသည် ။ ခြေပစ်လက်ပစ် ဆိုသလိုလည်း ဖြစ်သွားတော့သည် ။
~~~~ ပြီးပါပြီ ~~~~
၀မ်း သာ ပါ တယ် ကို အေး